हामी एक ठाउँमा छौं: बिमलेन्द्र, प्रकासमान र शशांक
११ असार २०७८, शुक्रबार २२:४७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । आसन्न १४ औं महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति को बन्ने भन्ने होडबाजि चलेको छ । सभापति शेर बहादुर देउवा पार्टीलाई एकतबद्ध बनाइ आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सबै भन्दा ठुलो दल बनाएर बिश्राम लिने भन्दै अन्तिम पटक आफुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
देउवाको इच्छालाई उनकै विश्वास पात्र मानिएका उपसभापति बिमलेन्द्र निधीले चुनौति दिदै आफुले पनि सभापतिमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन् । यस्तै, देउवाका अर्का विश्वास पात्र गोपालमान श्रेष्ठले पनि देउवालाई सहयोग गर्न नसकिने बताएका छन् । उनी पनि आफै सभापतिका दावेदार हुन् ।
यस्तै, संस्थापन इतर समूहमा पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डा. शेखर कोइराला, डा. शशांक कोइराला, प्रकासमान सिंह, सुजाता कोइराला लगायका नेताबीच सभापतिको उम्मेदवार बन्न घम्साघम्सी परेको छ । महाधिवेशन कै विषयमा छलफल गर्न उसले अपरान्न आफु पक्षीय छ्ट्टै बैठक बोलाएको छ ।
यस्तै, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, युवा नेता गगन थापा लगायतका नेताहरुबीच पनि महाधिवेशन केन्द्रीत रहेर छलफल तिव्र बनाएका छन् । यस्तै कांग्रेसभित्र प्रभावशाली मानिएका दोस्रो तहका नेताहरु उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह शुक्रबार कोइरालाको निवास महाराजगञ्ज पुगेर महाधिवेशन केन्द्रित छलफललाई निरन्तरता दिएका छन्। सोमबार निधी निवास बानेश्वरमा भेटघाट गरेका तीन नेताहरुले आजको छलफल पनि त्यसकै निरन्तरता भएको बताएका छन् ।
उनीहरू तीनै जना भदौमा हुने कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापति उठ्ने तयारी गरिरहेका छन्। त्यसैले सभापतिमा तीनै जना उठ्ने कि एकअर्कालाई सहयोग गरेर एकमात्रै उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारे केन्द्रित रहेर उनीहरूले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।
आजको छलफलपछि महामन्त्री कोइरालाले आफूहरू एकै ठाउँमा रहेको दावी गर्दै पार्टीलाई गुट उपगुटबाट मुक्त गरी महाधिवेशन र आगामी निर्वाचनमा सिंगो पार्टी एक भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । महामन्त्री कोइरालाले भने, ‘महाधिवेशनमा सभापतिमा को उठ्ने वा कसलाई सहयोग गर्ने त्यो पछि निर्णय हुन्छ । अहिलेलाई हामी एठाउँमा छौं । तीनै जनाको एउटै भ्वाइस महाधिवेशन पछि आगामी चुनावमा कांग्रेलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्छ ।’
तीन जनाबीचको छलफललाई निरन्तरता दिने पनि आजको बैठकमा सहमति भएको छ । अहिले पौडेल समूहको बैठकमा भाग लिन प्रकासमान सिंह र शशांक कोइराला बसुन्धारा जाने तयारीमा छन् ।
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाक्यको आज छिनोफानो
काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि आज मतदान हुँदै छ । त्यसका लागि आज दिउँसो १…
१० कार्तिक २०७८, बुधबार ०८:३१
१० कार्तिक २०७८, बुधबार ०८:२८